CAN Beach Soccer: hanainga anio ny Malagasy | NewsMada
Notsofina rano teny amin’ny foiben’ny federasiona malagasy ny baolina kitra, Isoraka, ireo mpilalao miisa 12 hiatrika ny dingana famaranana amin’ny fiadiana ny amboaran’i Afrika, baolina kitra eny amin’ny tora-pasika. Lalao izay hatao any Egipta manomboka rahampitso 8 desambra, hatramin’ny 11 desambra ho avy izao.
Vonona ny hitondra avo ny voninahi-pirenena ny ekipa malagasy Barea mandritra ity lalao hotanterahina any Ejypta ity. Nivoatra ny traikefan’ireo mpilalao tamin’ity taona ity, raha ny voka-dalao no jerena. Tsara mantsy ny vokatra ho an’ny Malagasy, raha hiverenana ny lalao farany tamin’ny fifanintsanana, nifanandrinan’ny Barea tamin’ny ekipan’ny Mozambika. Nomontsanin’ny Malagasy tamin’ny isa 5 no ho 4 ry zareo Mozambikanina, nandritra ny lalao mandroso notanterahina tany Mozambika. Sahala 5 no ho 5 kosa ny fifanandrinana tamin’ny lalao miverina notontosaina tany Mahajanga. Isa 10 no ho 9, araka izany, no nisarahan’ny roa tonta rehefa natao ny tambatr’isa ka nahazo ny tapakila hiatrehana izao dingana famaranana amin’ny CAN 2018 izao ny ekipa malagasy.
Fantatra fa hisantatra ny lalao, ny alatsinainy ho avy izao, ny ekipa malagasy, manoloana ny ekipan’ny Egipta, raha ny fandaharam-potoana. Nanome toky ireo mpilalao fa hanao izay fara hery handresena ity ekipa mpampiantrano ity ary hitondra medaly hiverina eto an-tanindrazana.
Anio amin’ny 2 ora sy sasany no hanainga ireo mpilalao miisa 12 tarihin’ny filohan’ny delegasiona, Benony Jacques.
Ny lisitry ny mpilalao, hanainga anio
1- RAFALIMANANA Jhorialy
2- ANDRIMIFEHY Chrétien
3- LAIAGNARA Jean Jacques
4- ETIENNE Giovanni Oscar
5- RICHARD Marcel
6- RATSIAMARINALA Jasmin Juliot
7- RAMANANTSOANY Hollas
8- RABEASIMBOLA Tianasoa
9- RAZAFIMNDIMBY Ymelda
10- ENIDIEL Régis
11- FITANA Romain
12- RAZAFINILAINA Angeluc